Qaybaha Mashiinnada CNC ee Gaarka loo sameeyay
Farsamooyinka farsamaynta qaybaha makaanikada waxaa loola jeedaa habka beddelka cabbirka ama sifooyinka shaqada iyada oo loo marayo qalabka farsamada.Marka loo eego farqiga u dhexeeya habka wax-soo-saarka, waxaa loo qaybin karaa jarista iyo cadaadiska cadaadiska.
Hababka farsamaynta qaybaha makaanikada inta badan waxaa ka mid ah: leexinta, shiididda, qorsheynta, gelinta, shiididda, qodista, caajiska, feerka, abuurka iyo habab kale.Waxa kale oo ka mid noqon kara goynta siliga, shubista, been-abuurka, daxalka korantada, farsamaynta budada, electroplating, iyo daaweynta kulaylka iyo wixii la mid ah.
Waxa jira mishiin bir ah oo toosan iyo mishiinka xadhig toosan;Qalabka cusubi wuxuu leeyahay mishiinka caaga ah ee CNC, oo inta badan farsameeya jirka rotary;
Waxa jira shiidid toosan iyo wax-shiidid toosan;Qalabka cusubi wuxuu leeyahay wax-shiidka CNC, oo sidoo kale loo yaqaan xarunta machining CNC, inta badan habka jeexdin iyo aagga qorshaha qaabeynta.Dabcan, waxay sidoo kale ku farsamayn kartaa camber leh laba faas ama saddex faas oo CNC Machining Center.
Inta badan habka qorshaha qaabka dusha sare ee goobta.Xaaladaha caadiga ah, qallafsanaanta dusha sare kama sarayso mashiinka wax lagu shiidayo;
Waxaa loo fahmi karaa sida qorye toosan, oo ku habboon farsamaynta qaanso wareeg ah oo aan dhammaystirnayn.
Waxaa jira shiidi diyaarad, shiidi goobada, shiidi god gudaha, iyo shiidi qalab, iwm processing dusha saxan sare, roughness dusha workpiece waa gaar ahaan sare;
Sida caadiga ah, waa habaynta godad.
7. caajis ah:
Inta badan waa dalool caajis ah iyada oo loo marayo qalabka caajiska ah ama daab, iyo sidoo kale ka baaraandegidda dhexroor weyn, dalool sax ah oo sarreeya, iyo qaabka workpiece ka weyn.
Inta badan waxa ay feedh ku samaysaa mishiinka feedhaha, kaas oo feedhi kara dalool wareegsan ama qaab gaar ah u samaysan.
9. Goynta iyo Goynta:
Inta badan waxa ay wax ku goysaa mishiinka wax lagu gooyo, oo inta badan loo isticmaalo habka faaruqinta.
Mashiin kasta wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo sax ah, iyada oo aan la helin qaybaha mishiinka, mashiinku waa mid aan dhamaystirnayn.Taasi waa sababta ay qaybaha mishiinadu u ciyaaraan doorka ugu muhiimsan ee warshadaha farsamada.
Iyada oo horumarinta otomaatiga ah, tignoolajiyada farsamaynta farsamada ayaa sidoo kale bilaabay in ay si otomaatig ah u noqoto jihada horumarka joogtada ah, waa in ay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta bulshada mustaqbalka, waad ogtahay, awoodda habka farsamada waa horumarinta dhaqaalaha qaranka.BMT, waxaan u adeegsanaa tignoolajiyada si aad u wanaagsan, si aan u siino qaybaha mashiinada ugu fiican macaamiisheena.Haddii wax loo baahdo, fadlan nala soo xidhiidh isla markiiba.
Tuubada saxanka 1
Tuubo saxan 2
Tuubo saxan 1
Alaabooyin Kale Oo Aan Sameynay
Hore: Qaybaha Biraha ee CNC Machining
Xiga: Su'aalaha Dhabta ah ee Habaynta Mashiinka ee CNC
Siyaabaha Lagu Gaadho Isbadalka iyo Kor U Qaadista 3
Noocyada CNC Machining
Mashiinka Qaybaha Makaanikada
Qaybaha Mashiinnada CNC ee Saxda Sare ee dhidibka
Makiinada, Cnc Titanium Machining, Mashiinka gaarka ah, Qaybaha Mashiinada Saxda ah, Machining sax ah, Qaybaha birta xaashida-dhamaadka-sare ee la habeeyey,